तुलसी। घर बढ्दै।
तुलसी जसको उचाइ 50 सेन्टिमिटर गर्न मात्रा वार्षिक बोट छ। पृथ्वीको बढ्दो भाग एक सुखद स्वाद र सुगन्ध संग आवश्यक तेल भरिएको छ। सबैभन्दा आवश्यक तेल पात र फूल (एक प्रतिशत) छन्।
ताजा अवस्थामा यसलाई भिटामिन सी (250 350 गर्न मिलीग्राम) र carotene धेरै (29मिलीग्राम uncooked को प्रति सय ग्राम देखि) समावेश छन्।
तुलसी बलियो-गन्ध बोट pryanovkusovym छ, त्यसैले तपाईं यस्तो राम्रो कुरा छ भने आफ्नो पूर्ण एक मसला रूपमा प्रयोग। त्यसैले, सलाद ड्रेसिङ, सूप, gravies, मासु र माछा व्यञ्जन गर्न, पनीर, सस र marinades गर्न एउटा सानो रकममा, aromatiziruya क्यान्ड तरकारी नुन र तुलसी ससेज मा थपिएका छन्। आफ्नो घर बढ्दै भन्दा यो देखिन्छ सजिलो छ। तपाईं बस कसरी गर्न केही विधि थाहा छ।
साथै, तुलसी को प्रयोग चिकित्सा प्रतिबिम्बित गरिएको छ। उहाँले antifebrific, diuretic र निस्संक्रामक छ। तुलसी व्यवहार gastritis, colic र खाना विषाक्तता को जलीय निकाल्छ। यसको पात को Decoction, टाउको दुखाइ व्यवहार गर्छन्। साथै, पातहरू स्नान लागि स्वादिष्ट, को rinses, compresses, घाउ निको, विभिन्न eczemas को उपचार रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
यो तुलसी कसरी बढ्न सिक्न समय। तपाईं बोट तुलसी गर्न loamy संरचना संग, उर्वर, भोकमरी माटो मा एक स्थान प्रदान गर्नु पर्छ। खेती घर एक अपेक्षाकृत उच्च तापमान प्रदान गरिनु पर्छ - 12 15 को बीच डिग्री सेल्सियस। माटो हुन ध्यानपूर्वक पूर्व-उपचार गर्नुपर्छ र यसको सतह लगायो गर्नुपर्छ।
रोचक नाम "तुलसी"। यदि यसको बीउ बक्से मा अप्रिल को शुरुवात संग छरिएको छन्, कोठा मा राखिएको हुनुपर्छ जो गरम छन् (30 8 द्वारा सेन्टिमिटर बीउ को 1 ग्राम संग inoculated द्वारा 60 को एक आकार बक्स को दर मा) यस बोट को खेती धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
एक धेरै नै महत्वपूर्ण कारक हामी तुलसी बढ्न जारी हुनेछ जहाँ क्षेत्रमा कुनै पनि अन्य वनस्पति को अभाव छ। यसलाई अर्को अतिरिक्त वनस्पति नराम्ररी उपजको र गुणस्तर असर गर्न सक्छ त यो बढ्दै, एकदम सुस्त छ।
यो तुलसी बढ्छ कि देशमा मा भन्नुपर्छ। संस्कृति तुलसी खेती माटो गर्न सल्फ्युरिक एसिड, अमोनियम को बीस ग्राम थप्दा स्वीकार्छन् वा यूरिया लागि विकल्प दस ग्राम को राशि मा लागू गर्न सकिन्छ रूपमा, वा को बीस ग्राम संग superphosphate तीस चालीस गर्न ग्राम देखि पोटासियम क्लोराइड (आधारित - एक वर्ग मीटर)। यदि उर्वर माटो अपर्याप्त छ, वा weakly एक जैविक मल प्रकार प्रयोग गर्न सकिन्छ उत्पादन गरिन्छ (आधारित - एक बाल्टिन वर्ग मीटर एक आधा देखि)।
छर्न तुलसी पाँच छ गर्न सेन्टिमिटर तिनीहरूलाई बीच अफसेट दूरी संग श्रृंखला हुनुपर्छ।
त्यसपछि बीउ राम्ररी माटो, आधा सेन्टिमिटरले अधिकतम मोटाइ को मिश्रण sifted गर्नुपर्छ कवर।
उद्भव पछि, बिरुवा देखि23 सेन्टिमिटर को एक नम्बर को एक दूरी मा पातलो हुनुपर्छ।
जब साठी दिन बारेमा पास, बिरुवा 5,6पात फारम, ऊ लगाए गर्न सकिन्छ।
तपाईं तुलसी फूल गर्न सुरु भएको छ याद भने, के तपाईंले बाली काट्ने गर्न सक्नुहुन्छ। तत्परता निर्धारण बाली तपाईं हरियो पात को बाक्लो ठूलो र यो भन्दा denser उठ्दा भन्ने मौका दिनेछु लागि, महान् आवश्यक तेल को सामग्रीको Basilica हुनेछ।
पात हानि को डिग्री सानो थियो, कटाई बाहिर रूपमा चाँडै सकेसम्म उहाँले पात बन्द फेंक गर्न थाले सम्म लगे हुनुपर्छ।
बाली तुलसी घरमा हुर्केका, तपाईं तुरुन्त खान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, वा भविष्यमा संरक्षण लागि सुक्खामा बाहिर पठाउन। उचित सुकाउने तापमान (छैन 35 भन्दा डिग्री सेल्सियस) संग, यो यसको प्राकृतिक रंग गुमाउनु छैन र यो सबै निहित आवश्यक तेल राख्ने हुनेछ।
Gladiolus वसन्त सम्म स्वस्थ कसरी सुरक्षित गर्न
फूल को अद्भुत विश्व - dahlias "हंसमुख Fellows"
जाभाकुसुम। हेरविचार र प्रजनन
प्रभावशाली Bruner: रोपण र हेरविचार
के लिंदा बाल तपाईं आवश्यक
तल्ला पलिश shellac: रंग प्यालेट, आवेदन प्रविधि, को merits र अवगुण
नोभेम्बर मा सोची मा छुट्टी: समीक्षा, मौसम, होटल र आकर्षण
लचीलापन - यो ... अवधारणालाई र लोच को प्रकार। माग र आपूर्ति को लोच
प्रोस्टेट क्यान्सर को निदान मा सेक्स जीवन कि समाप्त हुन्छ? को potency कसरी कायम गर्ने?
इगोर बललाव: जीवनी र रचनात्मकता
दुखाइ कम गर्न Antinociceptive मानव सिस्टम
जीवन वा गम्भीर hypotensive दबाब कसरी जुटाउने।